Ny horohoron-tany mahery 7.1 tany Acapulco, Meksika dia nanasokajy an'i Orange, mety hanimba tanteraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny horohoron-tany mahery 7.1 tany Acapulco, Meksika dia nanasokajy an'i Orange, mety hanimba tanteraka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
A 7.1. horohoron-tany akaikin'i Acapulco, tanàna misy 2 tapitrisa mahery no mety ho ratsy. Horohoron-tany roa tamin'ny 6.2 sy 7.1 dia norefesina tao anatin'ny minitra talata hariva tao amin'ny fanjakan'i Guerreo, any Mexico.
Guerrero dia fanjakana eo amin'ny morontsirak'i Pasifika any Mexico. Ny tanàna fialantsasatra ao Acapulco, miorina eo amin'ny helodrano lehibe tohanan'ny havoana avo sy ny tendrombohitra Sierra Madre del Sur, dia fantatra amin'ny fiainana an-dàlam-be sy torapasika manamorona ny Helodrano Acapulco sy ny faritr'i Acapulco Diamante.
Horohoron-tany 6.2 mahery no refesina tamin'ny 8.47 alina, ary horohoron-tany 7.1 hafa minitra taty aoriana, ary 7.4 hafa kosa namely ny faritra segondra taty aoriana. Olona maherin'ny 2 tapitrisa no monina ao anatin'ny 15 kilaometatra miala ny horohoron-tany.
Ny horohoron-tany dia nosokajian'ny USGS ary novaina ho 7.0 ary niverina ho 7.1 indray
Fampandrenesana volomboasary noho ny fatiantoka maty noho ny fikorontanana sy ny fatiantoka ara-toekarena. Maty ny fahavoazana lehibe sy ny fahavoazana ary mety hiparitaka ny loza. Ny fampandrenesana voasary lasa dia nitaky valiny isam-paritra na nasionaly. Matetika ny fahasimbana amin'ity sokajy ity dia azo tombanana eo anelanelan'ny 100 Tapitrisa ka hatramin'ny 1 Miliara USD, izay latsaky ny 1% amin'ny harin-karena faobe any Mexico.
Raha manana fianakaviana any Acapulco, Morelos na Mexico City ianao, azafady mba jereo izy ireo horohoron-tany tsy vazivazy !!!
Tweet ho an'ny eTurboNews
Ny horohoron-tany voasary dia tombanana mety hiteraka fahafatesan'olona an-jatony na an'arivony.
Ny Service National Seismological Service dia nanatsara ny horohoron-tany izay namely ny morontsirak'i Pasifika Meksika tamin'ny haavon'ny 7.1. Ny ivon-toerany dia teo akaikin'ny toeram-pialan-tsasatra Acapulco. Ilay horohoron-tany dia nandefa ny mponina sy ny mpizahatany hidina an-dalambe ary nampihozongozona tranobe hatrany amin'ny tanànan'i Mexico.
Tsy dia misy tatitra firy tonga avy any Acapulco milaza tsy fahatokisana.
#InfoGlobal | Un sismo de magnitude 7.1 no an'ny Acapulco # México se registró la noche de este martes. Autoridades no han reportado pérdidas humanas hasta el momento no daños de gravedad. pic.twitter.com/bl3C0nfv0T
- Info Loja (@infolojaec) Septambra 8, 2021
Ity ny tomban'ezan'ny USGS
Amin'ny ankapobeny, ny mponina ao amin'ity faritra ity dia mitoetra amin'ny rafitra izay mifangaro amin'ny fananganana marefo sy tsy tantin'ny horohoron-tany. Ny karazana tranobe mora tohina indrindra dia ny rindrin'ny fotaka sy ny hadisoana misy ny fananganana fantsom-bozaka.
Ny horohoron-tany farany teo tany amin'ity faritra ity dia niteraka loza mitatao toy ny tsunami sy ny fihotsahan'ny tany izay mety niteraka fatiantoka.
Raha ny filazan'ny USGS dia tsy misy atahorana ny tsunami any Pasifika noho io horohorontany io. Fampitandremana tsunami no nateraky ny tompon'andraikitra eo an-toerana ho an'ny morontsirak'i Pasifika Meksikana. Tsy misy tatitra momba ny tsunami na aiza na aiza amin'izao fotoana izao.
Ity horohorontany tany Mexico ity dia tsapa ho toy ny
matanjaka tokoa amin'ny 756,000+
Mahery amin'ny 379,000+
Modérate amin'ny 873.00+
Fahazavana avy amin'ny 22,985
Malemy amin'ny 25,754
Mbola aloha loatra ny milaza hoe ohatrinona ny fahasimbana naterak'ity horohorontany ity.
Ny ivon-toerany dia 8 kilometatra atsimoatsinanan'ny atsinanana #Acapulco, Guerrero. Tapaka ny fahatapahan-jiro sy ny famoahana entona.
Nisy ny fandrahonana momba ny tsunami tany Pasifika nanombanana ary nofoanana.
Ny fihotsahan'ny tany any amin'ny faritra akaiky dia azo atao, saingy ny vitsy an'isa ihany no mety hisy fiantraikany amin'izany.
Ny fiatraikany amin'ny mponina lehibe kokoa ao amin'ny faritr'i Acapulco dia azo inoana ary tombanana.
Ny horohoron-tany dia nisy olona tany lavitra ny tanànan'i Mexico nidina an-dalambe.
Raha ny tatitra voaray avy any an-toerana dia 18 km monja miala ny tanàna fialamboly Acapulco no nisy horohorontany ary mety hisy fiatraikany lehibe izany.
# ÚLTIMAHORA #Sism de magnitude 7,4 en #Acapulco.#Terremoto #Horohoron-tany # México pic.twitter.com/IohZbjlGVv
- 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) Septambra 8, 2021
Ilay horohoron-tany dia mety hanimba, eTurboNews hanaraka ity vaovao ity.
USGS dia nandefa ny horohorontany dia 7.0 mahery ary norefesina tamin'ny 8.47 alina ora teo an-toerana tao Acapulco. na 1.47 maraina UTC amin'ny 9 Sep
Ny toerana: 16.950 ° N 99.788 ° W miaraka amin'ny 12.6. km ny halaliny.
Azo antoka ity horonantsary avy ao amin'ny tanànan'ny tanànan'i Roma Norte any Mexico ity nandritra ny horohorontany #Mico #BreakingNews #MexicoCity #earthquakes pic.twitter.com/ns0gjhdnXM
- John Knowing news 2 (@ john fahalalanaing2) Septambra 8, 2021
#Mamaky: Tatitra voalohany momba ny fahasimbana tany Acapulco, #Mico, manaraka ny haavon'ny 7.4 #horohoron-tany. pic.twitter.com/M21wOO0XkE
- RAJENDRA PATEL (@RAJENDRNCR) Septambra 8, 2021
Ny horohoron-tany dia tsapa hatrany amin'ny tanànan'ny Mexico.
VIDEO: Manangana sary eo akaikin'ny Acapulco, Mexico taorian'ny horohorontany 7.4M. OAY!
- Etazonia News Block (@USNewsBlock) Septambra 8, 2021
eTurboNews ny mpamaky ao Acapulco dia afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny WhatsApp, Telefaona, mailaka ao amin'ny https://travelnewsgroup.com/post/